USolwaziColleen Downs, oyi-South African Research Chair in Ecosystem Health and Biodiversity in KwaZulu-Natal and the Eastern Cape, noDkt Lorinda Hart noMcwaningi wase-UKZN nongumfundisi e-University of Namibia, bangabahleli bebhuku locwaningo lwe-Centre for Agriculture and Bioscience International (i-CABI) ngesihloko sezinyoni ezingewona umsinsi wokuzimilela.
Lencwadi enezahluko ezingama-45 ebizwa ngokuthi Invasive Birds Global Trends and Impacts, ebhalwe ngabantu abangaphezu kwama-80, ihlelwe izigaba ezintathu. Esokuqala silanda ngezinhlobo zezinyoni ezingewona umsinsi ezingama-32, esesibili sinaba ngezinto ezibulala imvelo bese kuthi esesithathu sibheke umphumela wohlobo lwezinyo olungewona umsinsi emiphakathini engumsinsi, izinkinga ezihambisana nokuphathwa kwezinyoni ezingewona umsinsi nokusetshenziswa kwesayensi yezakhamuzi ekucwaningweni kwezinyoni ezingewona umsinsi wokuzimilela.
‘(Lokhu) kungumsebenzi omkhulu wokuphosa esivivaneni solwazi emhlabeni ngezilwane ezingewona umsinsi kanti i-CABI iyaziqhenya ngokushicilela lencwadi,’ kusho umhleli oqoka ababhali uDkt David Hemming.
Lencwadi igxile ezinhlotsheni zezilwane ezingewona umsinsi ezicekela phansi imvelo ezibalwe kwi-Global Invasive Species Database (i-GISD) kanti ibala nezinhlobo ezintsha. Kudingidwa izinhlobo ezehlukene zamagwayigwayi, ama-parakeet, izipero, izimpangele, amadada nezikhova.
Lomqingo obuwenzelwe ukuthi ubeyinqolobane, ingxenye yawo yokuqala inolwazi oluwusizo noluphelele ngesimo sezinhlobo ezingewona umsinsi, okukhona kuzona indlela ezibukeka ngayo, ukudla ezikudlayo, izindlela zokuzalana nendawo yokuhlala. Iphinde yabheka umphumela wohlobo lwezinyoni ngalunye kwimvelo nezindlela zokuzinqanda manje nangomuso.
Lomqingo wocwaningo ubhalwe kucatshangwa abantu abehlukene. Uzothakaselwa ngabacwaningi, abafundi, ososayensi, izimenenja zezemvelo nezikhulu zikahulumeni, abahlola ubungozi nabo bonke abaqondene nokucwaninga, ukuphatha nokwenza izinhlelo eziphathelene nezinhlobo zezinyoni ezingewona umsinsi wokuzimilela futhi unikeza ulwazi oludingekayo lwezifundo zokugcina imvelo.
Kusetshenziswe imigomo yesayensi enqala kuloluhlelo lokuhlolwa ngabalingani kanti incwadi ibhalwe ngeminyaka emithathu kusukela ekucatshangweni kwayo kuye ekushicilelweni. U-Downs no-Hart bagqugquzeleka ukuthi benze ucwaningo oluvala igebe ngokolwazi noma olulungisa imfundisoze ngezinhlobo zezinyoni ezingewona umsinsi wokuzimilela. Lolu cwaningo luyisisekelo socwaningo lwangomuso nezinhlelo zokuphatha isimo semvelo emhlabeni jikelele.
Bethemba ukuthi lomqingo uzoba yisisekelo socwaningo lwangomuso ngokuletha emhlabeni ulwazi olungaziwa ngezinhlobo zezinyoni ezingewona umsinsi wokuzimilela.
U-Downs, osehlale e-UKZN iminyaka engaphezu kwengama-26, unolwazi olubanzi emikhakheni ehlukene oluphathelene nezilwane eziphila emhlabeni egxile ekugcineni imvelo nokusetshenziswa komhlaba. U-Hart, owenza izifundo zobudokotela ngaphansi kweso lika-Downs, ugxile ezinhlotsheni ezihlukene zocwaningo ezithinta imvelo nokuphathwa kwayo.